Featured News - Porn On Your Brain
Category: သတင်း Featured
Fetish, sadness: I now realize I can change
I first became addicted to the PMO cycle around 12. Early on, I also slowly became entrenched inaserious fetish addiction that fed into the PMO cycle. Easily by 13 or 14, I was already making daily use of PMO. Binge usage was common. In high school and early college, I was very depressed. […]
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ဆိုင်ရာမကျေနပ်မှု - ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပျက်ခြင်း၏အခန်းကဏ္,၊ အပေါ်မှညစ်ညမ်းသောနှိုင်းယှဉ်မှုများနှင့်အပြာဆိုင်ရာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကိုနှစ်သက်ခြင်း (၂၀၂၁)
မှတ်ချက်များ - ဤလေ့လာမှု (အောက်တွင်) သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုပုံစံကိုလိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းရှင်းပြသည့်ယန္တရားသည်မှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများရောအမျိုးသမီးများပါပါ ၀ င်သည်။ ဤသည်မှာ porn အသုံးပြုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပိုမို ဦး စားပေးနိုင်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၁ ကြိမ်မြောက် NoFap စိန်ခေါ်မှုနေ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဗားရှင်းအသစ်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်းကိုမင်းနှင့်အတူမျှဝေလိုပါကအလားတူပြproblemနာကိုတွန်းလှန်နေသူအချို့ကိုသင်လှုံ့ဆော်နိုင်သည်။ ငါပြောရမယ်၊ ငါ ၈ နှစ်နီးပါးလောက်အပြာစာစွဲနေတယ်၊ အားလုံးပြီးတဲ့အခါ […]
Porn Playbook: ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်း (ဗီဒီယို)
YBOP မှတ်ချက်များ“ porn playbook” ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းမှာညစ်ညမ်းညစ်ညမ်းမှုသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းမှပြproblemsနာများအကြောင်းပြောဆိုသူများအားအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုဖြစ်သည်။ အများဆုံးဖုံးကွယ်ထားသောညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည်လိင်ဆိုင်ရာပညာရှင်နှင့်ယခင်ပညာရေးနီကိုးလ်ပရာ့စ် (Gabe ၏ဗီဒီယိုတွင်ဖော်ပြထားသည်) ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် UCLA သုတေသီဟောင်းနီကိုးလ်ပရာ့စ် […]
အသက် ၂၂ - ၁၀ နှစ်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် ဦး နှောက်မြူသွားပြီ
တစ်နေ့ပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေဖူးတဲ့ဒီ MO / PMO ကိုဒီ ၁၀ နှစ်တာစွဲလမ်းမှုကိုငါချိုးဖျက်နိုင်တယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီကလူတိုင်းရဲ့အကူအညီနဲ့ငါနောက်ဆုံးတက္ကသိုလ်မှာ PMO မပါဘဲလွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၉၀ ကိုငါဖန်တီးခဲ့တယ်။ ဤအသိုင်းအဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရန်အမူအယာတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် […]
အမှတ်စဉ်အနှောက်အယှက်ပေးသူ / အသရေဖျက်မှုအပေါ်ဥပဒေရေးရာအောင်ပွဲများနီကိုးလ်ပရာ့စ် - သူမသည်ကျူးလွန်ခံရသူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်သူဖြစ်သည်!
ဤစာမျက်နှာသည် Dr.Prause ၏သားကောင်ဖြစ်သည်ဟူသောစာတန်းများကိုဖတ်ရှုခဲ့ကြသောစာနယ်ဇင်းသမားများနှင့်အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ မည်မျှပင်ထင်ရှားသည်ဖြစ်စေ၊ မည်သူမည်ဝါ၏မိတ်ဆွေများကသူတို့ကိုသံယောင်လိုက်စေကာမူပြောဆိုမှုများသည်သက်သေမဟုတ်ပါ။ စစ်မှန်သောသက်သေအထောက်အထားမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သည့်အချက်အလက်များပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ဖော်ပြထားသော“ သက်သေအထောက်အထား” မှာ […]
ဇနီး - ငါ့ကိုပြောပြပါရစေ .. အရာတွေပြောင်းလဲနေပြီ။ သူဟာအခုအချိန်ကစပြီးခက်ခဲနေတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းသည် (၅၁) နှစ်ဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့သောအနှစ် ၄၀ လုံးလုံးတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ သူဟာတစ်ပတ်ကို ၃ ဆဆ (ဆိုင်းငံ့ထားသောအခြေအနေများ) ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်ကသူ၏စွဲလမ်းမှုကိုငါသိသောအခါသူသည်အအေးခန်းကိုသွားခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အနှစ် ၄၀ စွဲစွဲလမ်းမှုမရှိသောနောက်လာမည့် ၂ နှစ်အတွင်းသူကြည့်ရှုမည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်း“ ပြန်လည်စတင်ခြင်း” အတွေ့အကြုံ - အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲဆိုခြင်းဖိုရမ် (၂၀၂၁) တွင် Abstinence ဂျာနယ်များ၏အရည်အသွေးဆန်းစစ်ချက်
မှတ်ချက် - အလွန်ကောင်းမွန်သောစာတမ်းသည် rebooting အတွေ့အကြုံ ၁၀၀ ကျော်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖိုရမ်များတွင်လူများကြုံတွေ့နေရသောအရာများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ပြန်လည်နာလန်ထူရေးဖိုရမ်များနှင့်ပတ်သက်သောဝါဒဖြန့်ချိမှုအများစုနှင့် (ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော၎င်းတို့အားလုံးသည်ဘာသာရေး၊ သုတ်ရည်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအစွန်းရောက်သူများကဲ့သို့) ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++ Arch Sex Behav ။ 100 ဇန်နဝါရီလ 2021, 5, David P Fernandez 1, Daria J Kuss2[…]
Kirby, M. (2021), Trends Urology & Men Health, 12: 6-10 ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်အတူအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနေသောဆယ်ကျော်သက်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားများတိုးပွားလာခြင်း၊ ၄ င်းတို့၏လိင်မှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု၊ ဤစာတမ်းသည် […] နှင့်အမျိုးသားများ၏ဆက်ဆံရေးကိုအတိုချုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
(၄၆) နှစ် - Porn သည်ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးဘဝ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဒစ်ကို de-sensitizing လုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်
ဒီမှာ 46M ငါကံကောင်းတယ် ဒါဟာငါ့အဘို့တော်တော်လေးလွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ ငါ porn သို့မဟုတ်နေ့စဉ် 25 နှစ်ကျော်ကြည့်ရှုကြ၏။ ထို့နောက် ၄/၄/၂၀၁၀ တွင်သန်းနှင့်ချီသောအချိန်ကာလကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများဖြင့်ညစ်ညမ်းစေပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ပြီးမြောက်သွားသည်။ ဒါဟာကျွန်မရဲ့လူမှုရေးဘဝ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ခြင်း၊ ငါ […] မှ4TB တီဘီဖျက်လိုက်တယ်